Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka iPhoto si iPhone 5 / iPhone 4s / iPhone 4
Sida loo sawiro ka iphoto wareejiyo iphone
Waa ay ilaa hadda nooca ugu badan ee suuqa kala iibsiga in la sameeyo si ay u iPhone oo isticmaalaya Mac ama PC. Si loo hubiyo in hannaanka sii aan ka kaaftoomi wax baahida user ka soo dejisan iyo rakibi Lugood software dambeeyay si xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin iyo user ay sii raaxaystaan ​​muuqaalada ugu fiican sidoo. Si aad u dhamayso user leeyahay in la raaco talaabada hagitaan talaabo talaabo oo uu soo halkan ku xusan si kala iibsiga qaadataa meel habsami leh.
Qeybta 1: Hagaha sawiro ka iphoto wareejiyo iPhone
Qeybta 2: Su'aalaha sawiro kala iibsiga ka iphoto in iphone <
Qeybta 3: Mid ka mid ah suuqa kala iibsiga iPhone sawir click si ay u gudbiyaan sawiro
1. iPhone waa in lagugu xiro kombiyuutarka si loo bilaabo nidaamka hab siman.
2.After xira telefoonka software Lugood waa in la bilaabay sidii ay wax yaabahan ugu weyn ee ku yaalla muhimka ah ee hanaanka. User ayaa sidoo kale u baahan tahay in ay doortaan qalabka ka dibna sawirro ka guddi ka tagay barnaamijka.
3.Once sawirada tab waxaa riixi PC oo dhan ama Mac photos in ay ku xiran ama synced la Lugood tusi doonaa.
4.f wax gal gaar ah oo ay tahay in la synced la iPhone user u baahan yahay in la doorto ikhtiyaarka ah "Dooro folder" ka dibna si gacanta ay doortaan sawirada ka folder la doonayo on PC iyo sawiro haddii ay yihiin in la markaas synced user u baahan tahay si ay u hubiyaan in doorasho ee "Dhamaan sawirada iyo Qaasaali" la doorto.
5.After user ay doorteen doorasho la doonayo waa in la ogaadaa in syncing ay bilaabi doonaan iyo ku dhameysatay ka dib markii user ka arki kartaa nuxurka gal iPhone oo aan wax dhibaato ah.
Qeybta 2: FAQ
1 FAQ: Ma sawiro ka iPhone bedeli karaa iphoto maxaa yeelay, waxaan u hesho fariin qalad ah oo leh "Error degsado image" Iphoto ma dajiyaan karaa sawiro aad, sababtoo ah waxaa dhibaato soo degsado image ah..
Jawaabta su'aashan waa farsamo iyo sabab la mid ah user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in faahfaahin qaar ka mid farsamo ee iPhone waxaa lagu heli sidaas daraaddeed ma ay kaliya xaalada ayaa ah mid la xalin laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Tallaabada ugu by habka tallaabo waa sida soo socota.
1.Within doorashada folder Mac user ay u baahan tahay in ay tirtirto file doorashada iphoto ah. File ayaa ku soo beegmay iyada oo qayb ka mid ah com.apple.iphoto.plist.
2.Within folder Cache ku jiro file Cache.db ah taas oo sidoo kale in la tirtiro.
3.Once Taasi waxaa lagu sameeyay habka kala iibsiga iphoto sawirka kor ku xusan waa in la daba mar kale si loo hubiyo in hannaanka loo xalin lahaa.
2 FAQ: in ay tirtirto ama aan si Delete
Ka dib markii ay soo degida images galay iphoto ka iPhone, sanduuq wada hadal kor booda weydiinaya haddii aad jeceshahay in aad tirtirto Photos on iPhone.
Asal ahaan waa qalad oo dhan ma. Waa dhab ahaantii shaqeynayaan smart ee Iphoto iyo sidoo kale iPhone in hubiyaa in ugu fiican waxaa la siiyaa sidoo kale boos dheeraad ah ayaa sidoo kale la sii daayay. Haddii geeddi-socodka waxaa ay kor u eegay oo dhan waxay ku bilaaban doono macno iyo user garan doonaa in sida ay muhiimka u tahay in ay tirtirto photos in lagu keeno.
1.Once iPhone uu xiriir la PC ama Mac iphoto helo telefoonka ee u gaar ah iyo in la hubiyo in pictures cusub ayaa sidoo kale la ogaado oo laga keeno.
2.Maintaining tayada iyo xal guud oo ka mid ah sawirada ay soo dhoofiyo si nidaamka iyo iphoto ka dibna wuxuu weydiinayaa user in ay tirtirto photos halkaas oo ay tahay in ay doortaan in ay ka saarto sawirada isla.
3.his ma aha oo kaliya bannaan oo duudduuban camera ee iPhone ayaa laakiin sidoo kale hubin doona in xaddi weyn oo meel waxaa sidoo kale la sii daayay. User ayaa sidoo kale hubin karaa in in habka wareejinta iphoto si iPhone ayaa sidoo kale raacay in ay keenaan oo dhan sawiro si ay iPhone in user ay u baahan tahay. Nidaamkan waxaa lagu Xusi, bilowgii tutorial this.
3 FAQ: iPhoto ma dajiyaan doonaa Pictures
Waa dhibaato la xiriirta tirada dadka isticmaala xal iyo inay hubiyaan in qof walba oo iyaga ka mid ah waxaa la socda in arrintan la xiriira si ay arrin guud waxaa waligeed ka horimaanin ka dhigi kara. Ka dib waxaa taxanaha ah ee qaraarkii in arrintan la xiriira waxaa laga dalban karaa si loo hubiyo in user marnaba arrintan mar kale wajihi.
1. xal ugu caadiga ah ee arrintan la xiriira waa in user a bareesada ka kartaa iPhone ka PC. Reboot PC iyo markaa geedi socodkii dib u bilowdo. In badan oo kiisaska ay u shaqayso ganaax aan wax dhibaato ah iyo waxaa sidoo kale loo arkaa in xalka ugu caadiga ah iyo ugu fudud.
user 2.Beerta furi kartaa maamulaha disk ee kombiyuutarka iyo hubi shaqeynta disk si loo hubiyo in drive adag ayaa ka shaqeyneysa si sax ah.
3.Within folder guriga user ka dooran kartaa sawirrada ah oo dhan in ay tahay in la keeno si ay iphoto ka dibna ay xaq u riixaya guddiga iphoto ugu weyn user u baahan yahay in la doorto ikhtiyaarka ah "Show Xirmada Tusmada" ah. Waxay ku tusi doono oo dhan photos la soo xulay in ay dajiyaan gudahood folder guriga. User ayaa markaas dhaqaaqi karaan sawiro si ay u meel kale gudahood PC / Mac iyo isku day iyaga dib-u-galinta.
4 FAQ: iphoto hayaa hartay
Ka dib markii qaar ka mid ah tallaabooyinka ay user raaci karaan arrintan la xiriira: user 1. baahan yahay in ay tirtirto file plist ah. Waxa kale oo ay u taagan tahay file liiska gaarka ah iyo waxa ku jira macluumaad ku saabsan iphoto iyo meelaha ay joogaan on nidaamka. Meesha waa com.apple.iphoto.plist.
2.If habka kor ku yaal aanu markaas ka shaqayn user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in xijaab khasnado la heli sida file cache.db la tirtiro si ay u sameeyaan shaqada software ah. Waxa kale oo la hoos ku qoran.
5 FAQ: iphoto ma aqoonsan doonto wajiyo / meelaha
Si aad u hesho xal ah mid ka mid ah hababka in lagu hoos ku xusan waxaa lagu saleyn karaa si aad u hesho natiijooyinka hab super si degdeg ah:
1. user tirtiri kartaa sawiro laga soo maktabadda iphoto ka dibna dib-u-dajiyaan karaa iyadoo la kaashanayo automatic gurmad.
2.If oo dhan geedi socodka lagu khasaaro user ka dooran kartaa "Automatic Soo Celinta" doorasho si loo hubiyo in arrinta la xalin.
3.Reinstalling barnaamijka oo dhan software sidoo kale ka heli doontaa user ee dhibaatada wuu ka bixi arrintan la xiriira.
Qeybta 3: Mid ka mid ah click kala iibsiga sawir iPhone si ay u gudbiyaan sawiro
Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan oo xitaa wax soo saarka Apple lafteeda ka maqan. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay helaan software ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira oo la odhan jiray sidii Wondershare TunesGo Retro u Mac. Waxaa jira dhowr ah faa'iidooyinka iyo qaar ka mid ah sida soo socota:
. saarka 1. waa 100% caddayn Galaydh maadaama ay jiraan hababka online jirin sida technology daruur ku lug
2.Beerta kala iibsiga sawirro qaab ah guuto kale oo suuragal ah oo badbaadiyay labadaba waqtiga iyo dadaal isticmaalaha.
3.It ilaaliyaa tayada ee user iyo hubiyaa in aan xitaa pixel hal beddeli halka kala iibsiga la sameeyey.
Si aad u heshid natiijada habka ugu wanaagsan ee suurto user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa la socda in arrintan la xiriira:
User 1. baahan yahay si ay u helaan http://www.wondershare.com/mac-ios-manager/ iyo soo bixi barnaamijka ka link siiyey. Marka lagu rakibay interface waa in la heli.
Phone 2.Beerta markaas waa in lagugu xiro PC ka dhex cable USB in ay timaado koox ah.
3.On sare ee software badhanka dar waa in la riixi si loo hubiyo in ay PC iyo Mac goobta ay ku jiraan sawiro waxaa lagu heli. Marka sanduuq cusub oo laga furay user u dooran karaan ikhtiyaarka sawirada hoos warbaahinta. Dhamaan sawirada in ay tahay in la keeno waa in la soo xulay oo button furan ka dibna waa in la weeraray.
4.At geeska kore ee midigta ah sawirada astaan ​​wax user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in icon browser Media la riixi in la furo folder iphoto muujinaysa dhan sawirada oo markaas waa jiidi oo hoos u si toos ah u furmo suuqa sawirka si aad u dhamaystirto tallaabooyinka iyo Geedi socodka.
> Resource > iPhone > Sida loo soo dejinta Photos ka iPhoto si iPhone